गर्भनिरोधक चक्कीसँगै कण्डम पनि प्रयोग गर्नुपर्छ ? - Tulsipur Online
Posted by Admin | ३० भाद्र २०७७, मंगलवार १५:५७ |
३०-भदौ / पारिवारिक जीवनमा धेरै व्यावहारिक समस्या हुन्छन् । यी समस्यामा झनै जटिल भनेको यौनसँग जोडिएको विषय हो । नेपाली समाजमा यौनको कुरालाई बाहिर गर्न लजाउने संस्कृतिका कारण पनि कतिपय जायज प्रश्न समेत त्यसै मनभित्रै हराउने गरेको छ ।
गर्भ निरोधक चक्की वा गर्भनिरोधक इन्जेक्सनहरू अनावश्यक गर्भ रोक्न प्रभावकारी हुन्छन् । तर तिनीहरू यौन रोग वा यौन संक्रमणबाट कुनै पनि प्रकारले सुरक्षा प्रदान गर्दैनन् । तपाईंलाई गर्भनिरोधक चक्की के हो भनेर जान्नु समेत महत्वपूर्ण छ । यो एक चक्की हो जसले महिलाको हार्मोनमा एस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोन हुने गर्छ ।
यी हार्मोनहरूले महिलाको अण्डकोशमा अण्डको विकास हुनबाट रोक्ने गर्छ । जसले गर्दा गर्भवती हुनबाट रोक्ने गर्छ । यो औषधिले सँगै गर्भाशयबाट बाहिर निस्कने तरल पदार्थलाई गाढा बनाउँछ ताकि शुक्राणु गर्भाशयसम्म नजाओस् । तर कण्डमले गर्भ नियन्त्रणसँगै आफ्नो साथीमा हुन सक्ने सम्भावित यौन रोगबाट बचाउने काम समेत गर्छ । साथसाथै अनावश्यक गर्भधारणको समस्याबाट पनि मुक्त गराउँछ । त्यसैले कन्डमको प्रयोग यौन रोगबाट बच्न समेत उपयुक्त हुन्छ ।
अनिच्छित गर्भावस्थाले नवविवाहित महिलाको स्वास्थ्यमा मात्रै असर गर्दैन यसले दम्पतीको सम्पूर्ण विवाहित जीवनलाई नै असर गर्न सक्छ । अनिच्छित गर्भधारणमा गर्भपतन गर्नु उपयुक्त समाधान होइन । बच्चा जन्माउने कि नजन्माउने भन्ने निर्णय दम्पतीको जीवनको महत्वपूर्ण निर्णय हो । गर्भपतन गर्नुभन्दा अनावश्यक गर्भधारण नै नहुने उपाय खोज्नु उपयुक्त हुन्छ ।
यसले महिलामा आर्थिक, सामाजिक र मानसिक रूपमा तनावमुक्त गर्न सहयोग मिल्छ । अनावश्यक गर्भावस्था कसरी जोगाउने ? कुन गर्भनिरोधक विधि प्रभावकारी छ र किन ? त्यस्ता धेरै प्रश्नहरू महिलाहरूको दिमागमा खडा हुन्छन् र यसको सही जवाफ समयमै उनीहरूलाई थाहा हुँदैन । सामान्यतया प्रायः महिलाहरू निम्न प्रश्नहरूको उत्तर जान्न चाहन्छन् ः
के पुरुष र महिलाले नै कण्डमको उपयोग गर्नुपर्छ ?
गर्भनिरोधक चक्की गर्भधारण रोक्न नवदम्पतीको लागि एक सुरक्षित र सरल तरिका हो । यसबाहेक, यी औषधिको धेरै फाइदाहरू छन् । यस गोलीले २० वर्षभन्दा कम उमेरका महिलाहरूमा मासिक अनियमितता र कम रक्तस्रावलाई नियमित गर्न मद्धत गर्छ । स्रोतः स्वास्थ्य पेज
Previousक्षमता कम, लोड धेरै हुँदा भासिन्छ सडक
Nextआज छैटौं बोगटी स्मृति दिवस